घोडाघोडीको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी– चौधरी « Anumodan National Daily
घोडाघोडीको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी– चौधरी
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७४, बिहीबार १२:०३
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिमामा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार ममताप्रसाद चौधरीसंग सहकर्मी प्रकाश मिश्रले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
मेयरका उम्मेदवार, घोडाघोडी नगरपालिका
– प्रचारप्रसार कसरी अघि बढिरहेको छ ?
मेरो पार्टीले मलाई विश्वास गरेर, योग्य देखेर नै उम्मेदवार वनाएको हुनुपर्छ । मेयर पदमा जिते भने केही गर्न सक्छु भन्ने विश्वास पनि छ । म स्थानीय तहको कामकर्तव्य र अधिकारबारे जानकार छु । त्यसैले जनताले मलाई दिनेमा विश्वस्त छु ।
नगरपालिकाको विकासका लागि केकस्ता योजना छन् ?
हामी नगरपालिकाभित्रका तालतलैया, नदीनाला व्यवस्थित वनाउने छौ । आन्तरिक र वाह्य पर्यटक भित्राउन योजनासहित अघि वढ्ने छौ । नगरको आम्दानी वढाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी क्षेत्रलाई राम्रो वनाउदै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छन् । घोडाघोडी प्राकृतिक रुपमा धनी भएकोले हामीले मनग्ये आम्दानी लिन सक्छौ । विश्व रामसार सूचीमा परेको घोडाघोडी तालको महत्त्व हामीले बुझाउन सकेकै छैनौ । सुख्खड वजार राजमार्गको प्रमुख केन्द्र भएकोले यसको विकास र विस्तार गर्न योजनावद्धरुपमा लाग्नु पर्छ ।
– तपाई युवा हुनुहुन्छ । युवाका लागि चाही कस्ता योजना छन् त ?
मुलुकभित्र रोजगारी नपाउँदा धेरै युवाहरू विभिन्न मुलुकमा पलायन भएर श्रम वेचिरहेका छन् । हाी युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेछौ । प्राकृतिक श्रोत साधन व्यवस्थापन गर्दा उद्यमशिलताको पनि विकास गर्नुपर्छ । हामीसंग थुप्रै सामुदायिक वन छन्, तर हैसियत विग्रेका छन् । तीनचार महिनामा वन खुल्छन् । ती सामुदायिक वनमा फलफुल खेति गर्नसक्यौ भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछन् ।
– घोडाघोडी नगरपालिकामा एमालेको अवस्था कस्तो छ ?
देशव्यापी रुपमा नै एमालेको लहर छ । राष्ट्रियताका सवालमा तथा स्थानीय क्षेत्रलाई विकेन्दिकरण गरेर जनतालाई अधिकारसम्पन्न वनाउने कुरामा स्पष्ट छ । एमालेकै सरकारको पालादेखि आफ्नो गाउँ आफैं वनाउ भन्ने सुरुवात भयो । हामी जनताको साथ र समर्थन एमालेले पाउनेमा विश्वस्त छौं ।
– चुनाव जित्ने आधार चाही के के हुन् ?
हामी स्थानीय गाउँठाउँ बनाउछौ भनेर लागेका छौ । जित्ने आधार पार्टीको स्पष्ट नीति हो । हामी टोलटोलमा पुगेर मतदातालाईलाई भेटेका छौं । उहाँहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । मसंग यो नगरलाई समृद्ध गर्ने दृष्टिकोण, योजना र क्षमता छ ।
– तपाई शिक्षण पेसाबाट आउनु भएको छ ? चुनाव जित्नु भएन भने फेरि उतै फर्किने हो कि ?
मैले शिक्षण जीवनलाई विदा गरिसके । अब म राजनीतिमा नै रहेर समाजलाई केही दिन्छु भनेर अघि वढिसकेको छु । त्यसैले म फेरि त्यता फर्किदैन । हुन त म योभन्दा पहिले प्राज्ञिक मान्छे नै हो, तर त्यहा पनि म लिडरकै रुपमा स्थापित थिए । विद्यार्थी हसँदा पनि संगठनको नेता थिए । शिक्षक हुदा पनि संगठनकै नेता रहे । त्यसैले नै मलाई पार्टीले विश्वास गरेको हो ।
– तपाईलाई पहाडी समुदाय विरोधीका रुपमा प्रचार गरिन्छ नि । के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रोमा राजनीति अलि तुच्छ र निकृष्ट खालको छ । यहाँ अरुको आङमा हिलो छ्याप्दा आफु सुग्घर देखिन्छु भन्ने ठान्छन् । हार मानसिकता भएकाहरूले नै मलाई पहाडीविरोधी भनेर गलत, असत्य, र भ्रामक आरोप लगाएका छन् । ममता चौधरीसंग गाह्रो हुन्छ भनेर मेरो अंक घटाएर आफ्नो अंक वढाउन यस्ता झुटा आरोप शुरु गरिएको छ । म पहाडी समूदाय विरोधी हैन । मैले यस्तो सोच्नै सक्दिन । म केवल नगर र जनताको विकासका लागि मात्रै सोचेर अघि वढेको छु । विभिन्न जातजाती, सस्कृति, भेषभुषा हाम्रो समाजका गहना र सम्पत्ति हुन् ।
म हामीलाई विजयी गराउन आग्रह गर्दछु । कमसेकम मलाई विश्वास गरिदिनुस । मैले आफ्नो सुखी जीवन छोडेर समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर मैदानमा आएको छु । हामी तपाईको मतको कदर गर्दै घोडाघोडीलाई देशकै उत्कृष्ट नगरका रुपमा विकास गरेर देखाउने छौ ।